တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တာဝန်ပြီးဆုံး၍ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိဘုရင့်နောင် ရိပ်သာဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် (ကြည်း၊ရေ၊လေ)စစ်သံမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိ သူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာ၌ ဦးစွာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံသည် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိပြီး သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ထုံးတမ်းစဉ်လာများ တွင်များစွာတူညီမှုရှိသည့် ထူးခြားသည့်အိမ်နီးချင်းကောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ဝင်ရောက်ချိန်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ နှစ်နိုင်ငံနှင့်နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးပိုမိုကျယ်ပြန့်၍ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လျက်ရှိပြီး ဆက်လက်၍လည်း နှစ်နိုင်ငံနှင့်နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား မိတ်ဆွေရင်း၊ ညီရင်းအစ်ကိုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြား သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ရာ၌ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများအတွက် အကျိုးရှိမည့် ကိစ္စရပ်များကိုအလေးထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါတွင်နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ဆက်ဆံရေးအခြေအနေမှာ မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်နိုင်ငံများအဖြစ်အကောင်းဆုံး အခြေအနေတွင်ရောက်ရှိနေပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်ချင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခိုင်မာမှုများမှတစ်ဆင့်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးများပိုမိုတိုးတက် ခိုင်မြဲစေပါကြောင်းပြန်လည် ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ကြည်း၊ရေ၊လေတပ်ဖွဲ့များ အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုများကိုအခြေခံ၍ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည် ရေးတိုးတက်ခိုင်မြဲအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အခြေအနေများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ် ကိုင်လျက်ရှိသည့်မြန်မာ အလုပ်သမားများ စည်းကမ်းစနစ်တကျရှိရေးထိုင်းနိုင်ငံကကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးနေသည့် အခြေအနေများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အပါအ၀င်နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေး တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ စစ်ဘက် ဆေးပညာရပ်များနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် နယ်စပ် ဒေသတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများ နှင့်အတူစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တာဝနျပွီးဆုံး၍ပွနျလညျထှကျခှာမညျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာထိုငျးနိုငျငံသံ အမတျကွီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိဘုရငျ့နောငျ ရိပျသာဧညျ့ခနျးမ ဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျော (ကွညျး၊ရေ၊လေ)စဈသံမှူးမြားနှငျ့ တာဝနျရှိ သူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာ၌ ဦးစှာတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာ-ထိုငျးနှဈနိုငျငံသညျ နယျနိမိတျခငျြးထိစပျလကျြရှိပွီး သမိုငျး၊ ယဉျကြေးမှုနှငျ့ ထုံးတမျးစဉျလာမြား တှငျမြားစှာတူညီမှုရှိသညျ့ ထူးခွားသညျ့အိမျနီးခငျြးကောငျးနိုငျငံမြားဖွဈကွောငျး၊ မိမိတို့ နိုငျငံ၏ နိုငျငံရေးပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြားနှငျ့ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံအဖွဈဝငျရောကျခြိနျတှငျ ထိုငျးနိုငျငံမှကူညီဆောငျရှကျပေးခဲ့ကွောငျး၊ ယခုအခါ နှဈနိုငျငံနှငျ့နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ဆကျဆံရေးပိုမိုကယျြပွနျ့၍ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုမြား တိုးတကျ ကောငျးမှနျလကျြရှိပွီး ဆကျလကျ၍လညျး နှဈနိုငျငံနှငျ့နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား မိတျဆှရေငျး၊ ညီရငျးအဈကိုစိတျဓာတျဖွငျ့ ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျးပွောကွား သညျ။
မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာထိုငျးနိုငျငံသံအမတျကွီးက မွနျမာနိုငျငံတှငျတာဝနျ ထမျးဆောငျခဲ့ရာ၌ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရေးနှငျ့ နှဈနိုငျငံပွညျသူမြားအတှကျ အကြိုးရှိမညျ့ ကိစ်စရပျမြားကိုအလေးထား ဆောငျရှကျခဲ့ကွောငျး၊ ယခုအခါတှငျနှဈနိုငျငံခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ဆကျဆံရေးအခွအေနမှော မဟာဗြူဟာမိတျဖကျနိုငျငံမြားအဖွဈအကောငျးဆုံး အခွအေနတှေငျရောကျရှိနပေါကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောခငျြးဆကျဆံရေးကောငျးမှနျခိုငျမာမှုမြားမှတဈဆငျ့နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးမြားပိုမိုတိုးတကျ ခိုငျမွဲစပေါကွောငျးပွနျလညျ ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ကွညျး၊ရေ၊လတေပျဖှဲ့မြား အခငျြးခငျြး ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျမှုမြားကိုအခွခေံ၍ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျ ရေးတိုးတကျခိုငျမွဲအောငျ လုပျဆောငျနိုငျသညျ့အခွအေနမြေား၊ ထိုငျးနိုငျငံတှငျအလုပျလုပျ ကိုငျလကျြရှိသညျ့မွနျမာ အလုပျသမားမြား စညျးကမျးစနဈတကရြှိရေးထိုငျးနိုငျငံကကူညီ စောငျ့ရှောကျပေးနသေညျ့ အခွအေနမြေား၊ ခရီးသှားလုပျငနျးပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျး အပါအဝငျနှဈနိုငျငံစီးပှားရေး တိုးမွှငျ့ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ စဈဘကျ ဆေးပညာရပျမြားနှငျ့ စိုကျပြိုးရေးနညျးပညာမြား အပွနျအလှနျဖလှယျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ နှဈနိုငျငံနယျနိမိတျဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားနှငျ့ နယျစပျ ဒသေတညျငွိမျ အေးခမျြးရေး၊ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအားရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြး ဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာထိုငျးနိုငျငံ သံအမတျကွီးအား အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးပေးအပျပွီး တကျရောကျလာကွသူမြား နှငျ့အတူစုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
ဇန်နဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၈ Admin 0